အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာ extruder စက်
Feed Line အခြားစက်များ
ကြက်သား feed ကိုလုံးလေးကိုဗီဒီယို
ငါးအစာကျွေးခြင်း extrusion လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဗီဒီယို
ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအစာပါ ၀ င်သည့်အရာများအားခွဲခြားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း, လူများသည်အစာ၏ gelatinization နှင့်အစာကြေလွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန် pelleting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။. ၎င်း၏အမည်ကိုဆိုလိုသကဲ့သို့, ငါးအစာကျွေးခြင်းသည်ဖိသိပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်, ပူပြင်းသည့်လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်လုံးလေးများပုံသဏ္intoာန်ထဲသို့အစာထည့်သွင်းသည့်ပစ္စည်းများနှင့်အစာတောင့်များကိုပုံသွင်းခြင်း, အစိုဓာတ်နှင့်ဖိအား. ရေပေါ်ကထုတ်လုပ် Pelleted နှင့် extruded feed ကို ငါးတောင့်စက် အစာကြေနိုင်မှုမြင့်မားသောကြောင့် extruder သည်ငါးအများစုအတွက်အဓိကကျသည့်အစာဖြစ်လာသည်, ပေါများသောအာဟာရနှင့်ရေပေါ်ဂုဏ်သတ္တိများ.
Pelleting သည်အပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်တွင် feed ပါဝင်သောအရောအနှောများကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်, ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်ထဲတွင်အစိုဓာတ်နှင့်ဖိအားမြင့်မားသည် – ကုန်ကြမ်းသေမှိုမှတဆင့်ဖိနေကြသည်. အတွေ့အကြုံအများကြီးအရသိရသည်, ပါဝင်ပစ္စည်းများတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ရေနွေးငွေ့နှင့်အပူများလွန်းလွန်းလွန်းလွန်း။ အပူချိန်မလုံလောက်ခြင်းနှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောရောနှောခြင်းများကြောင့်အစာတောင့်များတွင်ပါသောအန္တရာယ်ရှိသောရောဂါပိုးမွှားများကိုမသတ်နိုင်သည့်အပြင်တောင့်တောင့်ကိုအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းစေသည်။. ပြီးပြည့်စုံသောငါးအစာတောင့်သို့သွားရန်လမ်းကြောင်းသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်လိုအပ်သည် ငါးအစာကျွေးခြင်း extruder. အစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ အစာကျွေးခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနှင့်ငါးအစာအာဟာရတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်စက်နှင့်နည်းပညာများကိုစက်နှင့်ပတ်။ အစဉ်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေသည်။. ယခု၏အသေးစိတ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆွေးနွေးကြကုန်အံ့ ငါးအစာတောင့်အောင်.ငါးအစာကျွေးခြင်း extrusion, ခြောက်သွေ့သောငါးအစာဖြုန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စိုစွတ်သောငါးအစာကြေထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်အပါအ ၀ င်, Aqua ငါးအစာကျွေးခြင်းထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကုန်ကြမ်းများကိုစည်ဖြင့်ဝက်အူများဖြင့်တွန်းတင်ပြီးစည်အဆုံး၌သေဆုံးခြင်းမှဖိအားပေးသောနေရာဖြစ်သည်။. ယေဘူယျအားဖြင့်ငါးအစာထုတ်လွှတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အချိန်တိုအတွင်းအပူချိန်မြင့်မားသည်. သေဆုံးသူမှထွက်သွားသည့်အခါအစာထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက် ၁၀၀ ထက်ပိုသောအပူချိန်လိုအပ်သည်. အပူချိန်မြင့်သောအပူရှိန်သည်စည်နှင့်ဝက်အူမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့အပူမျက်နှာပြင်များမှစက်မှုစွမ်းအင်များဖြုန်းတီးခြင်းဖြင့်ရရှိသည်, သို့မဟုတ်မြို့ရိုးနှင့်ပစ္စည်းနှင့်ဝက်အူနှင့်ပစ္စည်းအကြားညှပ်တပ်ဖွဲ့များကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့
1.ကြိတ်ခွဲ: ရောနှောခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာအသုံးချမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်, လူများသည်သေးငယ်သောအမှုန်များထဲသို့ငါးအစာကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ခွဲရန်လိုအပ်သည်, အရာအမြဲတမ်းကြိတ်ခွဲစက်လိုအပ်သည် – မျက်ရည်စက်လေးတွေငါးအစာကျွေး. အချိန်အတောအတွင်း, ပစ္စည်းများအမှုန်အရွယ်အစားလာမယ့် pelleting ဖြစ်စဉ်တွင်အစာကျွေးခြင်းအရွယ်အစားနှင့်အရည်အသွေးအပေါ်ကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်. ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်, ရေချိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူငါးအများစုအတွက်ကြိတ်ခြင်းဒီဂရီနီးပါးရှိသည် 40 ကွက် (420တစ်ခု), လူငယ်ငါးများအတွက်နေစဉ်, လှည့်ပတ် 60 ကွက် (250တစ်ခု).
2.ရောစပ်ခြင်း: နေ့စဉ်ငါးပမာဏသည်နည်းသည်, ဤအရပ်မှ, နေ့စဉ်အစာမှအစာအာဟာရပြည့်ဝစွာရရှိစေရန်အစာပါဝင်ပစ္စည်းများကြိတ်ခွဲပြီးနောက်တစ်ပုံစံတည်းရောနှောသင့်သည်. ရောနှောနေသည့်ရောနှောခြင်းအတိုင်းအတာသည်အစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ငါးအစာအရည်အသွေးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်, ဒါကြောင့်သင့်တော်တဲ့ရောစပ်စက်ကိုရွေးချယ်တာဟာအတော်လေးသိသာထင်ရှားပါတယ်. ဒီမှာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာစီးဆင်းနိုင်စွမ်းနှင့်အမှုန့်များနှင့်အမှုန်ပစ္စည်းများအားညီမျှစွာပေါင်းစပ်ရန်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောငါးအရောအနှော FY-500 ကိုအကြံပြုပါသည်.
3.ခေါင်းလောင်း: အကယ်၍ ငါးမွေးမြူသူများအနေဖြင့်တိကျသောရည်မှန်းချက်များအတိုင်းအတာနှင့်ကိုက်ညီသောရေပေါ်အစာလေးများထုတ်လုပ်ရန်လိုပါက, ကြာရှည်ခံမှု, သိပ်သည်းဆနှင့်အာဟာရဖွဲ့စည်းမှု, ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်အရသင့်လျော်သောရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုရွေးချယ်သင့်သည်, ထုတ်လုပ်မှုစကေး, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရေနေတိရိစ္ဆာန်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အလေ့အထများအစာကျွေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောငါးအစာတောင့်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးခွေးနှင့်ကြောင်ကဲ့သို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။. ထို့အပြင်, ကွဲပြားခြားနားသောအချင်းနှင့်အတူရေပေါ်ငါး feed ကိုလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်ခဲယဉ်းသည် (များသောအားဖြင့် 0.9mm မှ 15mm အထိ), ရေချိုငါးအတောင့်ကြိတ်စက်၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲရုံဖြင့်မှိုသေသည်, ၎င်းသည်ငါးအမျိုးအစားနှင့်ကြီးထွားမှုအခြေအနေအရငါးမွေးမြူသူများအားပိုမိုရွေးချယ်လွယ်သောရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်.
သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
မိုဘိုင်း / whatsapp / wechat：008618768871537
လိပ်စာ：Xingyang စက်မှုဇုန်,Zhengzhou မြို့,Henan ပြည်နယ်,တရုတ်
မူပိုင်ခွင့် © 2012-2021 ဗစ်တာ Pellet စက်. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
wechat အတွက် QR ကုဒ်ကိုစစ်ဆေးပါ